HomeSuuqaDavid Luiz Oo Qarka U Saaran Inuu €49m Ugu Wareego PSG
Ciyaaryahanka David Luiz ayaa qarka u saran inuu ugu wareego kooxda Faransiiska ah ee Paris Saint German, heshiis qiimihiisu dhan yahay €49 million.
Chelsea oo uu ka tirsan yahay ayaa dardar gallinaysa wadahadalada iibka ciyaaryahankan difaaca ahi ku tagayo naadiga lacagta badan kharash garaynaya ee PSG, waxaana la rajaynayaa in is afgarad buuxa laga gaadho ka hor bilaabashada koobka aduunka.
PSG ayaa doonaysa inay ka hor qaado laacibkan reer Brazil kooxda Barcelona oo si weyn u doonaysa, kuwaas oo markii ay xaaladan ka war heleen diiiradooda u leexiyey dhinaca saaxiibkiisa ay isku wadanka yihiin ee Marquinhos.
Marquinhos oo ah difaacyahan 20 jir ah , isla markaana xagaagii hore uun ka soo wareegay kooxda Roma , ayaa loo badinayaa in ka tagistiisa Paris ay sababayso imaanshaha David Luis ee naadigu ku raad joogo.
Tababaraha kooxda Chelsea, Jose Mourinho ayaa bixiyey amarka tagista Luis kadib markii uu kursiga kaydka dhigay intii uu kooxda ku soo noqdayba, kana door biday difaacyahanada ay kamidka yihiin John Terry iyo Gary Cahill inuu difaaca ku mataaneeyo.
Lacag lagu qiyaasay €49m ayaa la filayaa inay miiska saarto kooxda Reer France, ciyaaryahankana hakad laga galliyo u duulistiisa Brazil , ee uu u ambabaxo dhinaca Paris si uu qalinka ugu duugo saxeexiisa warqada Heshiiska, isla markaana u maro tijaabada caafimaad.
Klaas Jan Huntelaar Oo Guuldaro Kala Baxsaday Netherlands
Zanetti Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Kubada Cagta